बच्चाले व्यायाम नगर्दा के हुन्छ ? « Kakharaa
एजेन्सी । हामी भन्छौं, तीस बर्ष पार गरेपछि अनिवार्य व्यायाम गर्नुपर्छ । खानपानमा सर्तक हुनुपर्छ । स्वास्थ्य जाँच गराउनुपर्छ ।
के बालबालिकालाई व्यायाम आवश्यक छैन ? उनीहरु दिनभर जे(जसरी खेल्छन्, उफ्रन्छन् त्यती नै काफी छ त ?